- Multichannel CRM ayaa iman doonta:
- Diyaar u noqo Qalabka AI-powered:
- Isdhexgalinta Naqshadeynta Maqalka:
- Kor u kaca bulshada CRM:
- Muuqaalka iftiiminta CRM ah:
- Xalka CRM ee dhinacyada kala duwan:
CRM (Maaraynta Xiriirka Macaamiisha) Horumarinta waxay arkeen horumar aan dhammaystirneyn oo ku saabsan muuqaalka suuq-galinta casriga ah. Ururada Ganacsiga ayaa rajeynaya in isbedelka CRM ee 2017 ay faa'iido u yeeshaan hababkaas oo ay la qabsadaan macaamiishooda.
Ururrada samafalka waxay badbaadinayaan wax shaqo ah oo ay ku muujinayaan qiimaha ay u leeyihiin macaamiisha ee ku jira suuqa iibka digital-ka ee xoogga leh. Mahadcelintooda waxay keeneen hagaajinta tababarka CRM, taas oo ah qayb ka mid ah qaybaha aasaasiga ah ee xafiisyada suuq-geynta ee dhammaan wareegyada. Halkan waxaa ah qaabab cusub oo CRM ah kuwaas oo looga baahan yahay inay kordho 2017:
Maadaama xiriirka macmiilka si tartiib tartiib ah loo hirgeliyay ololeyaal fudud oo fudfududeynaya, Qaab dhismeedka CRM waxaa lagu kordhiyay karti badan oo awood leh oo kumbuyuutar ah oo kobcinaya qaabka ugu sarreeya.
Ururada suuq-geynta ayaa maareynaya cabbir aan la garan karin. Sahaminta waaya-aragnimada iyo qaadashada waxqabadyada ku habboon iyadoo la tixgelinayo xogtan ballaaran ee la socota waa imtixaan. Manmade duubista maskaxda (AI) ayaa siin doona xayeysiin muhiim ah ee aqoonta iyo caawinta xayeysiinta si loo abuuro ololayaal suuq-gareed oo cusub.
Meelaha CRM ayaa la jahawareersanaa PA (Imtixaanka Predictive) muddo dheer. 2017 waxay uqayb qaadan doontaa isku xirka dhabta ah ee CRM ee PA iyada oo la tixgelinayo tixgelinta qadarin leh oo abuuri doona qaabab badan oo ku habboon.
CRM waa ay fiicantahay in la tago si aan loo dhigin marxaladda isku-xirnaanta shabakadaha internetka ee suuq-geynta macaamiisha. 2017 waxay arki doontaa jidka CRM-ga oo leh jimicsi ku saabsan luuqadaha bulshada iyo dareenka kufilan imtixaanka.
Macaamiishu waxay u soo jeesteen inay si tartiib tartiib ah u fikiraan waxaanay diyaar u yihiin inay cadaadiyaan fariimahooda suuqgeynta. 2017 ayaa markhaati u ah horumarinta kartida kartida loo siman yahay ee xooga saaraya, kormeerida jajabyada macaamilka yar ee macaamilka iyo la hadlida suuq-geynta qiimaha leh adoo diirada saaraya macaamiisha kan ugu fiican, waqtiga ugu fiican, fariinta ugu fiican.
Maadaama macaamiisha ay filayaan fariimaha 'calaamadaha', xayaysiinta waxay u baahan doonaan in badan oo CRM ah. Qaybaha suuq-geynta macaamiisha waxay bixin doonaan jawaabo aan caadi aheyn oo kala duwan oo ay ka mid yihiin aasaaska miisaaniyada, ururada internetka, ciyaaraha, iyo wixii la mid ah.
Horumarinta suuq-geynta oo u socotay in la hayo xogta ayaa u jeestay baahida loo qabo suuq-geynta suuqa. 2017, macaamiishu waxay filan karaan fariin qoto dheer oo xariif ah oo ficil ahaan ah oo wax ka qabta rabitaankooda iyo baahiyahooda. Tani waxaa lagu gaari karaa iyada oo la siinayo tababbarka CRM iyo qabanqaabooyin ku habboon baahida macaamiisha.